Baarlamaanka Puntland oo soo saaray 13 Qodob oo diidmo ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Baarlamaanka Puntland oo soo saaray 13 Qodob oo diidmo ah
Golaha Wakiiladda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray xaalada Siyaasadeed ee dalka,sida Arimaha doorashada,Mataalada Gobolka Banaadir iyo xeerarka ay an sixiyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Kulan ay Maanta Xildhibaannada Puntland ku yeesheen garoowe ayaa waxaa ay kasoo saareen War-Saxaafadeedka ka kooban 13 qodob , iyaga oo ku sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin Xeerarka doorashadooyinka oo ay ansixiyeen Xildhibannada Golaha Shacabka.
Sidoo kale Golaha Wakiilada Puntand waxaa ay gebi ahaanba diideen matalada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare laga siiyay 13 Xubnood,iyaga oo sidoo kale sheegay in hadal-jeedintii guddoomiyaha Guddiga madax bannaan ee doorasjooyinka ay u muuqatay mid Guddiga uu ku fashilmay Shaqooyinkii loo igmaday.
Golaha wakiilada Puntland ayaa sidoo kale sheegeen inay aaminsan yihiin in Gobolada Banaadir, Sool iyo Sanaag ay xaq u leeyihiin inay helaan matalaada Aqalka sare,iyada oo loo marayo hab raacsan dastuurka dalka.
War-saxaafadeedka kasoo baxay Golaha wakiilada Puntland oo aad u dheer ayaa waxaa loogu baaqay Xukuumadda Puntland in aysan ka qeyb-gelin Shika uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo,waxaana sidoo kale ay sheegeen in Puntland ay qaadaneyso Go’aan kasta oo lagu badbaadinayo jiritaanka iyo masiirka Puntland.
Previous articleMadaxweynaha Soomaaliland oo Magacaabay Guddoomiyeyaal
Next articlePuntland oo qaadacday ka qeyb-galka shirkii uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo